NOOCYADA BEERISTA IYO DARYEELKA EE ILOW-AAN-AAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Noocyada iyo sharaxaadda illoobi-aniga-meeshiisa
Jooji-aniga-ma(Myosotis) - caleemaha dhirta ka soo jeeda qoyskiisa (Boraginaceae). Ha iqin-aan-dheer-dheer, yar oo cabbirka iyo ubaxyo qurux yar. Cirbaddani waa tiro badan waxayna leedahay qiyaas ahaan 50 nooc oo dhirta.
Ubaxa waa mid aad u caan ah waxaana uu ku baahsan yahay in laga helo dhamaanba adduunka, laga bilaabo Yurub ilaa Koonfur Afrika. Midabka ugu caansan ee ilooba-aan-ubaxa waa buluug ama buluug, oo leh indho jaale ah.
Jooji-aan-aan-inflorescences waxay leeyihiin qaab isir-qaabeeya, iyo ubaxa laftiisa waa razlohy aad u. Inkasta oo uu yar yahay, miisaan culus.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo Giriigga "illoobi-ma-aan" ayaa loo tarjumay "dhegta mouse".
Waxaa jira halyo badan oo ku saabsan asalka magaca-un ee aan illoobin. Mid ka mid ah waddamada ugu caansan iyo jaceylka ayaa ah in labada qof ee jacaylka ah, ay socdaan wadada qulqulka, ay soo gashay ubax qurxoon, ninka ayaa go'aansaday inuu soo qaado, laakiin wuxuu ka dhacay buurta. Diyaarad ayuu hoos u dhacay, wuxuu ku guuleystay inuu qeyliyo: "Ha i iloobin!" Tan iyo markaas, ubaxa wuxuu bilaabay in lagu magacaabo illoobin-aniga-ma.
Xusuusin-aan-buluug leh oo isku dhafan oo la socda tulooyinka, daffodils iyo chrysanthemums waxay u muuqdaan faa'iido badan beerta.
Qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee ubaxa waxay kuugu farxaan adigoon caleemo saarnayn inta lagu jiro hal xilli (Mon Ami Blue), noocyo kale ayaa ubaxaya laba xilli (Forget-me-not Alpine, Forget-me-not-Alpine Sadovaya), laakiin sidoo kale waxaa jira noocyo kala duwan oo buluug iyo buluug ah oo aan illoobin.
Nadir ahaan aagahayaga waxaa laga heli karaa casaan, dhar guduudan ama guduud ah oo aan illoobin-aniga-maya.
Noocyada sanadlaha ah ee illow-aan-ahayn
Ubax sanadle ah oo aan qabyo ahayn oo aan awood u lahayn xaaladaha xabsiga. Sidaas oo kale illaa aan illoobo. Hal sano-jir waxaa illoobi-aan-ah, sida caadiga ah, waxaa lagu beeray sidii miraha ciidda bacaha furan iyo bilaabaan ubax hore. Xaqiiqadani waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fiican ugu dhafatid dhirta dabka.
Nooca ugu caansan waa moni buluug. Ubaxyada kala duwan ayaa ah buluug madow, caleemuhuna waa cagaar-cagaaran, wadnaha-qaabeeya. Beelaha noocyadaasi waxay yeelan karaan midab kala duwan (casaan, caddaan, cadaan). Waxyuu ku badan yahay bilaha 7aad iyo 8aad.
Faa'iidada sanadle-illaa-aan-liisku waa suurtogalnimada helitaanka midabka xilliga koritaanka ugu horreeya, taas oo aad u faa'iido leh oo lagu koriyo.
Wixii geedka hore ubax, beereedka ayaa dhici karta, tusaale ahaan, dhammaadka October, ka dibna waxay ku jiri doontaa horraantii Abriil.
Noocyada labadii sano ee la iloobey-aniga-maya
Xayawaanka labajibbaaranaha ee la iloobo-aniga-maya - Tani waa habka ugu habboon ee habka caadiga ah ee warshadda dhirta by bannaanka u hiwaayadda. Kuwa ugu caansan waa Forget-me-not Alpine iyo Forget-me-not Alpine Sadovaya. Noocyada noocan ah, sida noocyada kaleba ee illow-aan-ahayn, ma aha mid sare (15-20 cm).
Cunto-aan-aan-Alpine waa mid aad u daacad ah, ubaxu waa buluug-dhalaal (qaabab isku dhafan ayaa noqon kara midabyo kala duwan), qiyaastii 0.5-1 cm dhexroor.
Waa muhiim! Abuurka Alle-Forget-Me-Ma aha mid madow iyo dhalaalaya, halka "miraha hal-jir" miraha waa midab ama midab madow oo leh qaab dhismeed.
Noocyada cimriga oo aan illoobin-aniga-maya
Si urka illowday-aan-aan kuugu farxin sanado badan, waxaad dooran kartaa nooc "qarxi ah".
Wakiilka caanka ah ee isaga ka ah Brunner Sibirskaya. Fikradda ah in tani tahay warshad kayn ah waa qalad. Waxay kuugu adeegi doontaa si fiican beerta, kaliya qoyaan loo baahan yahay.
Kala duwanaantani waxay ku liis garaysaa buugaagta casriga sababtoo ah dhirbaaxada. In Brunners, rhizome waa ka sii dhumuc weyn oo ku dhawaad ​​dusheed - astaamaha ugu weyn ee of this illoobin-aniga-ma. Ubaxa uma baahna xaalado gaar ah, doorbidid keliya ayaa ah hooska.
Si aad u illowdid-meeriska iyo ubaxkaba si aad ugu raaxaysataan markaad guriga ku korinayso, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad doorato nooca ugu haboon ee aad adigu leedahay, laakiin sidoo kale inaad beerato oo aad u daryeelto dhirta si haboon.
Xulashada iyo iftiinka
Jooji-aniga-aansii ugu wanaagsanaa hadhuudhka iyo hooska qayb ahaan. Waa qalad in la aamino in qorraxdu ay kor u qaadeyso muddada ubax - liddi ku ah, dhirta ubaxa waxay "gubi doonaan" iftiinka qorraxda.
By iyo weyn, illoobi-aniga ma u baahnayn in la dabciyo dhulka ka hor beerto abuurka / gooyn sidii markii lagu waraabiyo. Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la hubiyo waa inay dhulka ku degaan.
Haddii aysan kani ahayn, illoobi-maya-maya u kori karaan si aan sinnayn. Ka hor inta beerto, dhulka waa in la bacrimiyo leh humus ama peat. Isku day in aad iska ilaaliso xiriirka cusub ee la iloobey-aan-aan lahayn Bacriminta ammonia.
Ma taqaanaa? Looma baahna in la abuuro xaalado gaar ah "raaxo" ubaxyo. Sababtoo ah busting leh Bacriminta, ubaxa wuxuu bilaabmaa "is-burburinta": caleemuhu waxay nuugaan dhammaan miro-bixinta, iyo ubaxa laftiisa waxay u egtahay daciif.
Sidaa darteed aadan dhibaato ku qabin marka la iloobo-aniga-aan-ahayn ubax, waa inaad raacdaa talooyinka qaarkood ee aan ku qeexnay qodobkan ku saabsan illaalinta-aniga iyo daryeelkeeda.
Waxa ugu horreeya ee ubaxa u baahan yahay waa waraabinta saxda ah. Talada ugu muhiimsan - haddii ay sidaas dhacday in aad illowday-aniga-aan ku koraan meel qorrax leh, oo qoyan - biyo ka badan inta caadiga ah. Jooji-aniga-ma aha in aan la qalajin, sababtoo ah taasi waxay keenaysaa dayrta caleemaha iyo ubaxa. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu waraabiyo warshad hoosteeda, iyada oo iska ilaalineysa biyaha caleemaha iyo midabka.
Waa muhiim! Inkastoo xaqiiqda ah in illaa aan illaa aan la jecelnahay meelo qoyan, waxaa ugu wanaagsan in ay ku beeraan goobaha la bakhtiiyo iyo biyaha marar badan, laakin biyo yar si markaa warshadu u jajabiso.
Bacriminta iyo dharka ubaxa
Jooji-meeraha uma baahnid Bacriminta gaarka ah. Waxay u baahan yihiin in la quudiyo ka hor inta ubax kasta wax kasta oo bacriminta adag. Ha iloobin in qaybaha ammonia ay ka hortagaan ubaxkan!
Quudinta koowaad waa laba toddobaad ka dib marka la beerto. Bacriminta ugu wanaagsan ee loogu talagalay waa peat iyo humus, kuwaas oo inta badan lagu daraa ciidda inta lagu guda jiro beerashada illoobi-aniga-liiska.
Qaar badan oo beeralaydu waxay ku hawlan yihiin illow-aan-maqaal iyo koraan guriga. Si aan u iloobin - aniga oo aan ku faraxsaneyn muuqaalkooda iyo ur wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo baadho geedka.
Uma baahnid xirfado gaar ah halkan: waa ku filan inaad ku qiyaasto dhulka meesha aad dooranaysid, adoo ku darsaday peat iyo humus, godka yar yar iyo qodista dhirta halkaa. Laga soo bilaabo kor waxaa lagama maarmaan ah in lagu shubo biyo yar.
Haddii aad go'aansato inaad ku tallaaldo xilliga dayrta, ka dibna isku day inaad sameyso ka hor bilowga bilowga koowaad, sida illaalinta-aniga-aan ku habbooneyn "dhulka diiran".
Waxyaabaha ugu muhiimsan - si sax ah u qodo illaa aan-illaa-aan ka aheyn "meesha deganaansho hore". Si arrintan loo sameeyo, si tartiib ah u dhaji warshadda leh xidid leh alwaax ama alwaax caag ah, iyada oo aan waxyeello ka soo bixin.
Ma taqaanaa? Iibinta-aan-aan la beddeli karo, iyada oo aan loo eegin haddii uu ubaxayo ama aan.
Siyaabaha loola jeedo leexinta-aniga-aan
Fariin-aan-maqaalku waxay noqotaa mid caan ku ah beeralayda oo soo noqnoqda oo ka muuqda inta badan ubaxyada. Hababka faafinta ubax kala duwan ayaa loo isticmaalaa, taas oo aan ka hadli doono.
Goorma ay tahay inaad beerta iska ilowdo-aniga-aan? Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo ubax cajiib ah waa July, sababtoo ah dhulka horeyba waa diiran yahay, waxaana jira bil kale oo la qabsado oo xididka abuura.
Ka hor inta aadan beeri, qaso dhulka humus, qoyan yar, samayso godad gacmeed iyo ku rid abuurka ah ee ilowda-aan-maqaal dhulka. Seeds u baahan tahay in lagu rusheeyey ciid ah on top, daboolo filim, kaas oo ka dib 2 todobaad waa in laga saaro.
Waa muhiim! 2 toddobaad ee ugu horreeya ka dib beerista kama saari karto filimka, biyaha abuurka. Waxay u leeyihiin inay "mate", ka dibna dhirta xidid ka fiican.
Jarida waa habka ugu caansan ee taranta marka la macaamilayo illoobidda-aan-liiska. Wixii fayaqow, waxaad u baahan tahay inaad dooran karto baadiyaha si fiican u koraya oo jar jaraha ugu sareeya ee ka hooseeya asliga ah. Jiriddu waa in la geliyaa biyaha ilaa ay ka qaadato xididka. Markaas waxaa lagu beeray dhulka.
Si arrintan loo sameeyo, ee ciidda loo diyaariyey (qoyan, bacrimiyey leh peat iyo humus), godadka gacmeedku waa la sameeyaa, dhirta waxaa lagu beeray iyaga oo ku rusheeyaa dhul engegan oo kor ku yaal, oo ka waraabiyey xididada.
5 maalmood ka dib waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso. Waxay u fiicantahay inaad qaadatid caalamiyiin, inaad hubiso in aysan ku jirin qaybta ammonia.
Ku dhejinta illoobidda-aan-maqlaha iyada oo loo qaybinayo duurka ma aha sida adag sida ay u muuqato. Xidigga ubaxa waa razlohy, oo waxaa loo kala qaybin karaa hal dhaqdhaqaaqa. Waxaa lagama maarmaan ah in si tartiib ah dhulka ugu ruxruxo xididka geedka, dooro qayb ka mid ah qalabka nabarka ee "jilbaha" (qallooca), isaga jarjar geli.
Wixii farta ah ee wanaagsan, xididada waxaa lagu rusheeyaa xal of bacriminta guud. Markaas duurka waa la beeray sidii geedo caadi ah. Ka dib markii loo kala qaybiyo duurka sannadkan, abuurku wuu kala firdhin doonaa, duurka ayaa noqon doona mid aad u ballaaran, oo aan loo dulqaadan karin.
Waa lagama maarmaan in dhuuban duurka, sababtoo ah haddii aan iloobin-aan-aan-loo beeray mid aad u weyn, waxay keeni doontaa midab yar iyo midab dhalaalaya.
Isku-dubaridda-illaa aan-ku-laheyn goobta oo leh midabyo kale
Jooji-aan-maqaalku waa hab weyn oo lagu qurxiyo deyrkaaga. Ubax waxaa badanaa loo adeegsadaa naqshadeynta sariiraha lakabka, barkadaha qurxinta iyo barkadaha.
Jooji-aniga-aan si fiican ula tulips iyo daffodils, gaar ahaan urta ee ka kooban. Fariin-aan-u-eegin aad u wanaagsan oo leh foornooyinka dooxada ee meelaha aan cidhiidhi lahayn.
Cayayaanka iyo cudurrada aan illoobin-liiska, siyaabo loola dagaallamo
Ilaalinta-aan-aan-aheyn waa dhir aan qabyo ahayn, oo dhif ah ayay jiradaan. Haddii iloobin-aan-lagu beeray meel ciriiri ah, uma baahnid waraabinta, ka dibna waxa uu ka helaa midabka leh midab jilicsan iyo ur wacan.
Dumarka ugu weyn ee aan illoobi Karin-ma aha mid yahiin, kuwaas oo la dagaallami karo siyaabo badan. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo la awoodi karo waa sidan soo socota. In basin yar oo biyo ah, ku dar ash ashuun iyo saabuun, isku dar. Ku dhaji caleemaha xalka.
Hab kale waa xalinta saabuunta. Si aad u diyaargarowdid, waxaad u baahan tahay inaad milixdo 300 g oo biyo ah ama saabuun dareere ah 10 litir oo biyo ah. Ku buufi warshadda xalka this ka soo sprayer laba 2 asbuuc walba.
Si aad u-ilaalisid-aan-aan-ahayn-cayayaanka si aad u guulaysato, waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo dhamaan talooyinka lagu daryeelo ubax, ka dibna cuduradu ma kici doonaan.